Keto Flu ဆိုတာ ဘာလဲ... - Hello Sayarwon
ခုတလော ဝိတ်ချတဲ့သူတွေအကြားမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဝိတ်ချနည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုရှောင်ပြီးစားတဲ့ keto diet ပါ။ ဒီနည်းလမ်းက သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး ကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုးက ဆိုးကျိုးက ဒွန်တွနြေစမြဲပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ Keto Diet လုပ်ပြီး ဝိတ်ချနေသူတွေအတွက် သတိထားသင့်တဲ့ Keto Flu လေးအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Keto Diet ဆိုတာဘာလဲ………
Keto Diet ဆိုတာက ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး ပရိုတင်းပမာဏ အသင့်အတင့်နဲ့အဆီပါဝင်မှုများပါတယ်။ ဒီစားသောက်မှုပုံစံက လူတော်တော်များများအတွက်တော့ စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီစားသောက်မှုပုံစံကို ကျင့်သုံးတဲ့အခါ သတိထားရမှာက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီကို စားသုံးပေးပြီး အမြန်စား၊ အသင့်စားအစားအစာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။ နောက်တစ်ချက်က အချိုမှုန့်ကို ရှောင်ရမှာပါ။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့ အစားအစာတွေကိုလည်း လုံးဝစားလို့မရပါဘူး။
Keto Diet စားတဲ့အခါ
Keto Diet စားတဲ့အခါ ကြုံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်က Keto Flu ဖြစ်တာပါ။ ဒါကလူတိုင်းမှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာသောက်မှုပုံစံကို စတင်ချိန်မှာ ခံစားရလေ့ရှိပြီး ရက် အနည်းငယ်ကနေ နှစ်ပတ်လောက်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် keto flu ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား………
Keto Flu ဖြစ်တဲ့အခါ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံစားရပုံချင်း မတူနိုင်ပါဘူး။ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေကနေစလို့ အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေထိတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စားသောက်မှုပုံစံစတင်ပြောင်းလဲချိန်မှာ ဒီအခြေအနေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲတာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ့။ Keto Flu ခံစားနေရလားဆိုတာကို ဒီလက္ခဏာတွေကနေတဆင့် သိရနိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်ကတော့ Keto Diet စတင်ချိန်မှာ ဝမ်းလျှောတာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ ကြွက်သားတွေနာကျင်တာ၊ အချိုအရမ်းစားချင်တာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Keto Flu သက်သာအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ……….
Keto Flu သက်သာစေဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေက Keto Flu ကိုသက်သာစေမယ့်အပြင် အကောင်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်စေမှာပါ။
ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ရော Keto Flu လက္ခဏာတွေ သက်သာစေဖို့အတွက်ပါ။ ရေကို လုံလောက်အောင် သောက်ပေးပါ။ ဒီစားသောက်မှုပုံစံက ကိုယ်တွင်းမှာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်တာကြောင့် ရေဓါတ်ပြည့်ဝနေစေဖို့ ရေများများသောက်ပေးပါ။ ရေဓါတ်ပြည့်ဝနေမှုကြောင့် ခြေကုန်လက်ပမ်းကျတာနဲ့ ကြွက်တက်တာတွေကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီစားသောက်မှုပုံစံကိုစတင်ချိန်မှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်မိဖို့လိုပါမယ်။ Keto Diet စတင်ချိန် ပထမအပတ်မှာ ခန္ဓါကိုယ်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် Keto Diet စတင်နေချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ပါနဲ့။
Keto Flu မဖြစ်စေဖို့ နောက်ထပ် သတိထားရမယ့်အချက်က ပိုတက်ဆီယမ်လျှော့စားဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် Keto Diet စားနေချိန်မှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုများတဲ့ ငှက်ပျောသီး၊ ကီဝီသီးလိုမျိုးသစ်သီးတွေ၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှောင်ရပါမယ်။ ဒါတွေအပြင် အာလူး၊ ပိန်းဥ၊ ကန်စွန်းဥတို့ကိုလည်း ရှောင်ရပါမယ်။ အစိမ်ေးရာင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ ထောပတ်သီးကိုတော့ စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝခြင်းကလည်း Keto Flu ဖြစ်နိုင်ခြေများစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တွင်းမှာ ကော်တီစောဟော်မုန်းတွေများလာပြီး ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်စေဖို့ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပေးပါ။
ကဖင်းက အိပ်စက်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်စက်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှုက Keto Flu ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပိုများစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကဖင်းကိုဖြတ်ပါ။ မဖြတ်နိုင်ရင်လျှော့ပါ။
ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးနေပါ
ညအိပ်ခါနီးတိုင်း ဖုန်းတွေ၊ လက်ပ်တော့တွေကို ပိတ်ပြီး ခပ်ဝေးဝေးမှာထားပေးပါ။ ဒါက နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
မအိပ်ခင်မှာ လာဗင်ဒါဆီလိုမျိုး အဆီတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရေချိုးပေးပါ။ အိပ်ပျော်စေပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကို ကျန်းမာစေမှာပါ။
Keto Diet စားနေသူအနေနဲ့ သတိထားဖို့လိုမယ့် အချက်တစ်ချက်က ညဘက်တွေမှာ စောစောအိပ်ရာဝင်ဖို့ပါ။ ဒီလိုအိပ်ရာဝင်တာက အိပ်ရေးဝစေပြီး Keto Flu မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
ကျန်းမာစွာနဲ့ ဝိတ်ကျစေဖို့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုလိုက်နာပြီး Keto Diet နဲ့ ပိုနေတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေကို လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်လား……….
The Keto Flu: Symptoms and How to Get Rid of It https://www.healthline.com/nutrition/keto-flu-symptoms Accessed Date 17 September 2019
Why does the keto diet cause flu-like symptoms? https://www.medicalnewstoday.com/articles/326276.php Accessed Date 17 September 2019